Ahoana ny fomba fampandehanana maimaim-poana ny Microsoft Windows amin'ny PC-nao - Victor Mochere
Ahoana ny fomba hampiasana ny Microsoft Windows amin'ny PC maimaim-poana
Ny Microsoft Windows dia afaka mamita ny karazana asa isan'andro amin'ny solosainao. Afaka mampiasa MS Windows ianao hijerena Internet, hijery ny mailakao, hanova ny sary nomerika, hihaino mozika, hilalao lalao, ary hanao zavatra maro hafa. Fa raha te hampiasa ny rafitra fiasana dia mila mividy fanalahidin'ny vokatra na fahazoan-dàlana nomerika ianao amin'ny fampahavitrihana azy. Ny fividianana ny fanalahidin'ny vokatra na ny fahazoan-dàlana nomerika ho an'ny MS Windows dia lafo matetika ho an'ny ankamaroan'ny olona. Saingy misy fomba ahafahanao manetsika MS Windows tsy mividy ny fanalahidin'ny vokatra na ny fahazoan-dàlana nomerika.
Ahoana ny fomba hampiasana ny MS Windows amin'ny PC maimaim-poana
Raha te hampandeha ny MS Windows amin'ny solo-sainanao manokana (PC) dia ampiasao ireo dingana asongadina etsy ambany.
Mametraka Microsoft Windows
Afaho ary ampidiro KMSpeak
Mihazakazaha KMSpico ary hampavitrika ho azy ny Windows Windows
Azonao atao ny mampiasa ny MS Windows navitrika
Torohevitra ho an'ny mpianatra amin'ny taona voalohany
Torohevitra mampiaraka ho an'ny reny tokan-tena